sponsored အကြောင်းအရာ: SIGLENT SVA1015X Spectrum Analyzer - Infinity-Electronic
နေအိမ်သတင်းsponsored အကြောင်းအရာ: SIGLENT SVA1015X Spectrum Analyzer
အဆိုပါ SIGLENT SVA1015X ရောင်စဉ် Analyzer9kHz ကနေ 1.5 GHz အမြန်နှုန်းဖို့အကြိမ်ရေအကွာအဝေးအတွင်းအမျိုးမျိုးသောတိုင်းတာမှုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဂရိတ်အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးပါဝင်သည်နှင့်ရရှိနိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အင်္ဂါရပ်များအတွက်အခြေခံဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူအလွန်သေးငယ်နှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောအချက်ပြမှုများကိုတွေ့မြင် enable - အလွန်နိမ့် DANL -156dBm နှင့် RBW filter များ၏ကျယ်ပြန့် (1MHz 1HZ) ၏ (ပျှမ်းမျှဆူညံသံအဆင့်ကိုပြသ) ။ အဆိုပါခြေရာခံမီးစက်စံအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး, filter များနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်စကေးသွင်းအရှုံးတိုင်းတာလုပျဆောငျဖို့အသုံးပြုသူကို enable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဝေး, အကောင်းတစ်ဦး၏အခြေခံ spectrum ကို Analyzer ကနေမျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာခပ်သိမ်း, နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုဖြစ်နိုင်တဲ့ SVA1015X နှင့်အတူရှိနေပါသည်။
တဦးတည်း, ထိုအတောအတွင်းအတွက်အလွန်ဘုံလိုအပ်ချက် EMI ဒီဘာဂင်သို့မဟုတ် Pre-လိုက်နာမှုတိုင်းတာလုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာဒီဇိုင်းများ, IoT-devices များနှင့်သို့ပြောင်းရန် Mode ကိုပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမူလကပင် EMI ကိစ္စများအဘို့များစွာသောသတင်းရင်းမြစ်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ထို့ကွောငျ့, EMI Pre-လိုက်နာမှုတိုင်းတာနှင့်ဒီဘာဂင်အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာဒီဇိုင်းကာလအတွင်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြသည်။ Siglent သည့်အချိန်တွင်မဆိုဝယ်ယူခြင်းနှင့် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်သော SVA1015X တစ်ခု optional ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ option ကအထူး EMI-စိစစ်မှုများနှင့်လည်းအမည်ခံ Peak detector နှင့်အတူ RBW filter များ၏အစုကိုတိုးချဲ့။ အနီးလယ်ကွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး (SRF5030 (T)) အစုတခုထည့်သွင်းခြင်း entry ကိုအဆင့်ကိုဒီဘာဂင် set ကိုပြီးဆုံး။ တစ်ဦး LISN နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထဲမှာကောက်ယူ EMI Pre-လိုက်နာမှုတိုင်းတာဘို့ကြီးစွာသော setup ကိုပါပဲ။
တစ်ဦးကပိုပြီးအထူးပြုအင်္ဂါရပ် Vector ကွန်ယက်အားသုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ option တွင်လည်းမည်သည့်နောက်ပိုင်းတွင်အချိန်ကဆက်ပြောသည်နှင့် S11 နှင့် S21 တိုင်းတာဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုသူကို enable နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတိုင်းတာမှုများမှာ X-Y ကို (dB / အဆင့်-over-ကြိမ်နှုန်း), ဝင်ရိုးစွန်းသို့မဟုတ် Smith ကဇယားများကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောပုံစံများဖြင့်ပြသနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် filters အသံချဲ့စက် input ကို / output ကိုစင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်အင်တင်နာကိုက်ညီခြင်း၏သာဓကအုပ်စုတစ်စု-နှောင့်နှေးတိုင်းတာလွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်များအတွက်ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကို။ ရိုးရိုးသားသားရလဒ်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုစကားပြော stand-alone အာဆီယံ, အပြည့်အဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပေမယ်သို့ရာတွင်ဤ option များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်အစိုင်အခဲဖြစ်ပြီးသင့်ပါဘူး။
ကိစ္စတွင် 1.5GHz သင့် application များအတွက်နိုင်စွမ်းမဟုတ်နှငျ့သငျမွငျ့မားကြိမ်နှုန်းလိုအပ်ပါတယ် Siglent ရဲ့ SSA3000X စီးရီးမှာကြည့်ရှိသည်။ ကြောင်း ဒါဟာအလားတူစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ options ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအာဆီယံ option ကိုချန်လှပ်ထားသည်။ သငျသညျ 1.5GHz အထက်အာဆီယံတိုင်းတာမှုအတွက်အဖြေတစ်ခုလိုလျှင်မှာထွက်စောင့်ကြည့် www.siglenteu.com လမ်းမှာတစ်ခုခုရှိသေး၏။
Siglent သောသူသည်, အံ့သြနေသည်နှင့်သူတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲတဲ့သူလူတိုင်းအတွက် Siglent Technologies ကသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ 15 နှစ်ပြီးနောက် 2002 ခုနှစ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ် oscilloscopes ဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ခဲ့ပြီးထုတ်ကုန်အစုစုကို 50 MHz ကနေနှင့်ယခုကို up-to 1GHz ရောက်ရှိကြောင်း Bandwidth နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ် oscilloscopes, အထီးကျန် input ကိုလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲလက်ကိုင် oscilloscopes, function ကို / မင်းထက် waveform ပါဝင်သည် ထို့အပြင် bandwidth ကို၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး '(500MHz မှ 10MHz) တွင်မီးစက်, ထိုဓာတ်ခွဲခန်းအဘို့, DC ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, 6.5digits, ရောင်စဉ်ဖြာနှင့် 3.2GHz နှင့်အခြားယေဘုယျစမ်းသပ်တူရိယာဦးရေအများဆုံး Bandwidth နှင့်အတူ RF signal ကိုမီးစက်မှ 4.5 နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ် multi-မီတာ ။ Siglent စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်များ၏၎င်း၏အကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ 2019 ခုနှစ်များအတွက်အစီအစဉ်ထက်ပိုမို3ထုတ်ကုန်အသစ်တွေလွှတ်ပေးရန်နှင့်လုံးဝထုတ်ကုန်အသစ်အုပ်စုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်တူရိယာနှင့်အခြားလက်ပေါ်တဦးတည်းလက်ပေါ်ရှိလက်ရှိအစုစုကိုတိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကိုကျော်, Siglent အီလက်ထရောနစ်စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှတက်လာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်နှင့်အတူဆန်းသစ်သော features တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်။
Siglent လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှသုံးအဓိကရုံးတွေရှိတယ်။ ပထမဦးစွာရှန်ကျန်း, တရုတ်အတွက်ဌာနချုပ်မှ။ အားလုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်ဘဏ်ဍာရှိအမှုကိုပြုနေကြသည်။ အလုပ် 300 ကျော်ကလူရှိပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ, ဆော့ဖ်ဝဲ, စက်မှုဒီဇိုင်း, စမ်းသပ်မှုများနှင့်ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ်အလွန်အရည်အချင်းပြည့်မီစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအပါအဝင်အများအပြားဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် 100 ကျော်အင်ဂျင်နီယာများ
အမေရိကနှင့်ဥရောပထဲမှာခွဲများအမေရိကန်ရုံး, Solon တည်ရှိသော Cleveland / OH နှင့်ရုံးဖွင့်ပွဲကတည်းကပါကယခု6လူများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စိုက်ပျိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် 2014. ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကဒေသခံအရောင်း, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါဥရောပရုံးဟမ်းဘတ် / ဂျာမဏီတွင်တည်ရှိသည်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံထံမှအဝေးမှစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ 2018 ခုနှစ်မှစ. Siglent ဒေသခံဝန်ထမ်း employ မှစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ဝန်ဆောင်မှု & ပံ့ပိုးမှုအရောင်းနှင့်စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးသုံးန်ထမ်းရှိပါတယ်။ အဓိကရည်မှန်းချက်ဖောက်သည်များနှင့်အရောင်းမိတ်ဖက်ဖို့အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်ပိုကောင်းအောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးပြုပြင်နောက်ပိုင်းတွင်လည်းစက်ရုံစံကိုက်ညှိဥရောပ၏ဗဟိုမှာဒေသအလိုက်ပြုမိပါလိမ့်မည်။
မြေတပြင်လုံးကိုဥရောပရောင်းအားခွင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များအတွက်အားသာချက်လာမည့် Siglent ရောင်းအားမိတ်ဖက်ဝေးပုံမှန်အားမပေးကြောင်း, တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အပြီး-ရောင်းအားလှုပ်ရှားမှုများအားလုံး Pre-အရောင်းနှင့်စာရေးဒေသခံဘာသာစကားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင့်ရဲ့ Siglent ဖြန့်ဖြူးကိုရှာဖွေသင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည် www.siglenteu.com -> ဘယ်လိုဝယ်ပါရန်။
SIGLENT Technology ဂျာမနီ GmbH သည်
Liebigstr ။ 2-20
22113 ဟမ်းဘတ် / ဂျာမဏီ
& # x49; အဲန်အက်ဖ် & # x6f; x75 -e & #; s ကို & # x69 @; & # x67; ဌ & # x65; & # x6e; t ကို & # x63; ။ om